Hevitra mandalo resaky ny mpitsimpona akotry: Ezaka fampisehoana fahavononana hiova fenitra | NewsMada
Hevitra mandalo resaky ny mpitsimpona akotry: Ezaka fampisehoana fahavononana hiova fenitra
Zava-dehibe ny hetsika ataon’ny mpitsara amin’izao fotoana izao, izay entiny iarovany ny zony mahefa eo
amin’ny fanatanterahana ny andraikitra iadidiany. Mitaky fahasahiana ny fijorona amin’ny fanoherana ny mahazatra, azo lazaina anefa fa efa nahomby ny dingana kely vita, nanentana ny toe-tsaina any amin’ny sampan-draharaha hafa, nitarika fanehona hetaheta mikasika fahaleovantena tanteraka izay manambara ny tsy fiononana amina sarisari-na fahaleovantena. Manatahaka an’izany ny fanirina heno etsy sy eroa, Bianco, Ceni, raha tsy anonona afa tsy ireo samy mitondra anarana manambara mivantana ny filamatra fahaleovantenany.
Arak’izany dia dingana lehibe ny vitan’ny mpitsara tamin’ireo hetsika niandraiketany, fa tsy afaka ijanona amina fihetsiketsehana fotsiny ny fomba ahatratrarana ny tanjona, izay fikasana famerenana ny tokin’ny vahoaka amin’ny fitsarana, andry miantoka ny fiarovana ny rehetra manoloana an’izay mety ho tranga na tsy ara-dalàna na tsy ara-drariny. Isan’andro eo am-panatanterahana ny andraikitra mila fampisehona fahitsin’ny saina sy fanajana ny lalàna. Raha tina hazava amin’ny rehetra ny anton’ny tolona sy ny tanjona, aleo azava ny resaka. Mipetraka ny hoe fanadiovana sy fanarenana ? Noho izany nisy ny fahalotona sy ny fironana, tsy afenina intsony ny fahaverezan’ny mponina toky, boboka avokoa ireo andry iankinany, vonton’ny fitiavan-tena sy resin’ny hetraketraky ny vola avokoa, ka tsy misy afaka ianteherana. Noho izany lavitra ezaka ity tanjona apetraky ny mpitsara ity, ezaka isan’andro amin’ny famolahana ny tànana efa zatra nitsotra. Fitaizan-tena ahafahana itodi-damosina amin’ny fakampanahy. Tsy vola madinika mikorintsana fa taratasy mikasaotsaoka no mandravaka ny hiran’ny kolikoly.
Ohatra iray rahampitso dia rahampitso talata ao Toamasina nampiantson’ny fitsarana ilay Karana malaza maditra sady mahery setra no be fitapitaka maro mpankahala no toy ny valalan’amboa tsy ankatoavin’ny fikambana Karana, miambo ho lava tànana fa rehefa ela nitoratorahana tratran’ny aloka toy izao fiantsona azy izao. Ny tena izy moa araky ny didy mipetraka any am-ponja izy io amin’izao fotoana izao. Sao misy mihevitra fa ramatoa Claudine irery no afaka nivoaka avy eto amin’ny nosy na efa teo aza ny didy mandrara an’izany, IST. Io Karana io izay efa voafatotry ny didy toy izay, araky ny heno anefa dia tafaporitsaka ihany ka any amin’ny nosy la Réunion izy angamba rahampitso no hanao tazan-davitra sy ho tolatolaky ny fihomezana. Jerena eo ny fihetsika mitory fiovam-penitra.